नर्सिङ संघको निर्वाचन ९ पुसमा, छाता संगठनमा १२% नर्सको मात्र आबद्धता किन ? – Health Post Nepal
नर्सिङ संघको निर्वाचन ९ पुसमा, छाता संगठनमा १२% नर्सको मात्र आबद्धता किन ?
२०७६ मंसिर ५ गते १८:२४
मात्र सेवाभावले १८ वर्ष विदेश बसेकी म ४४ वर्षको उमेरमा नर्सिङ पेसामा फर्किएँ
नर्सहरूलाई एक महिनाको फोन सेवा निःशुल्क, प्रयोग गर्न यसो गर्नुहोस्
नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्व अध्यक्ष डा. हरी वदन प्रधानको निधन
नर्सहरूको छाता संगठन नेपाल नर्सिङ संघ (नान) को १९औँ कार्यसमितिका लागि ९ पुसमा निर्वाचन हुने भएको छ । हरेक ३ वर्षमा हुनुपर्ने संघको निर्वाचन २ वर्ष ढिलो गरी ५ वर्षपछि हुन लागको हो ।
१५ मंसिरमा उम्मेदवारी दर्ता, ९ पुसमा मतदान
संघले बिहीबार निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिकाअनुसार ८ मंसिरमा मतदाताको नामावली प्रकाशन हुनेछ भने त्यसमाथि दाबीविरोधका लागि १२ मंसिरसम्मको समय तोकिएको छ । १३ मंसिरमा मतदाता नामावलीमाथि परेको दाबीविरोधको छानबिन गर्ने र १४ मंसिरमा मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ ।
संघले उम्मेदवारी दर्ताको मिति १५ मंसिरका लागि तोकेको छ । मनोनयन गर्ने उम्मेदवारमाथि दाबीविरोधका लागि १६ मंंसिरको मिति तोकिएको छ । १८ मंसिरसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिनेछ भने १९ मंसिरमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यकालिका छ । मतदान भने ९ पुसका लागि तय गरिएको छ ।
९० हजार नर्स काउन्सिलमा दर्ता हुँदा जम्मा ११ हजार मात्र संघमा आबद्ध
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा हालसम्म ८९ हजार ७ सय ८७ नर्स दर्ता भइसकेका छन् । नर्सिङ अभ्यासका लागि अनुमति पाउनेको संख्या यति ठूलो भए पनि पेसागत संगठन संघमा आबद्ध हुने नर्स भने करिब १२ प्रतिशत मात्र छन् । हालसम्म जम्मा ११ हजार ४१ नर्सले मात्र संघको सदस्यता लिएका छन् । ९ मंसिरसम्म संघमा आबद्ध हुने सदस्यले मात्र आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने संघले जनाएको छ ।
सम्पूर्ण नर्सको छाता संगठनका रूपमा रहेको संघले नर्सका समस्या, पेसागत अप्ठ्याराहरूलाई उठाउन नसकेको र राजनीतिक दबाबमा पर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आफ्नो पेसागत हकहितका लागि गठित संघमा नर्सको न्यून आबद्धताले पनि ती आरोपलाई पुष्टि गर्छन् । संघले आफ्ना सदस्यलाई आवश्यक पर्दा संरक्षण दिन नसक्नु तथा संगठनलाई पेसागत विषयमामा भन्दा राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित गर्नुले नर्समा संघप्रति आकर्षण नभएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
Tags: नर्स, नेपाल नर्सिङ संघ